Sale Representative Archives - Glory Assumption Space
၁) Sales Representative (or ) Shop Incharges - Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ရုံးချုပ်) ။
၁) Sales Representative (or ) Shop Incharges - Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ် ~ ၃၅၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် (ရုံးချုပ်) ။ • Retail ပိုင်း Customer Service အတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ • မိန်းကလေးအရပ် ( ၅’၂”)၊ ယောကျာ်းလေးအရပ် (၅’၆”) အနည်းဆုံးရှိရမည်။ • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု (သိှု့ ) တက်ရောက်နေသူ(သို့) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ • ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး Fashion စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။ • အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတတ်ကျွမ်းရမည်။ • Myanmar Palaza ,Hledan Center,Sein-John , Junction City shopping mallများရှိBrand အရောင်းဆိုင်တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင် ရပါမည်။ ၂) Junior Sales Representative - Male/Female - (5) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ( ရုံးချုပ်) ။ • Retail ပိုင်း Customer Service အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။ • မိန်းကလေးအရပ် ( ၅’၂”)၊ ယောကျာ်းလေးအရပ် (၅’၆”) အနည်းဆုံးရှိရမည်။ • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခု (သိှု့ ) တက်ရောက်နေသူ(သို့) ဘွဲ့ရရှိပြီးသူ ဖြစ်ရမည်။ • ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး Fashion စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။ • အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးဆိုင်ရာတတ်ကျွမ်းရမည်။ • Myanmar Palaza ,Hledan Center,Sein-John , Junction City shopping mallများရှိBrand အရောင်းဆိုင်တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ ၃) Sales Man - Male/Female - ( 10 ) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ( ရုံးချုပ်) ။ • လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ • မိန်းကလေးအရပ် ( ၅’၂”)၊ ယောကျာ်းလေးအရပ် (၅’၆”) အနည်းဆုံးရှိရမည်။ • အခြေခံပညာအထက်တန်း (သို့) အထက်တန်းအောင်ရမည် ။ • ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီးအများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ • စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာလိုက်နာနိုင်ရမည်။ • ရုပ်ရည်သန့်ပြန့်ပြီး Fashion စိတ်ဝင်စားသူ ဖြစ်ရမည်။ • Myanmar Palaza ,Hledan Center,Sein-John , Junction City shopping mallများရှိBrand အရောင်းဆိုင်တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တောင်ဥက္ကလာပမြို့ နယ် ( ရုံးချုပ်) တွင်ရှိသော Fashion Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Representative – Female - (5)Posts /လစာ- ၁၇၀,၀၀၀ ကျပ်
Salary Rang : 170000
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ချက်ချင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1. Sales Representative – Female - (5)Posts /လစာ- ၁၇၀,၀၀၀ ကျပ်/ဘုရင့်နောင်မြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၂၅ မှ ၂၇ အထိဖြစ်ရမည်။ - အိမ်ထောင်မရှိသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Representative – Male (5)Posts/လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lubricant Distribution Company တွင်တာဝန် ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။စနေ၊တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။ 1.Sales Representative – Male (5)Posts/လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ - အသက် ၂၅ မှ ၃၀ အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - Customer အသစ်များရှာဖွေပေးနိုင်ရပြီးနေ့စဉ် Way လမ်းကြောင်းများဆွဲပေးနိုင်ရမည်။ - ရုံးတွင်း၊ပြင်ပ သွားလာလုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ - လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ နှင့်လိုက်လျောညီထွေစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09957693793, 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09262223785 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Representative – Male (5)Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောDistribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Sales Representative – Male (5)Posts/ လစာ- ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် /မြောက်ဒဂုံမြို့နယ်။ - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် ၂၂ မှ ၃၀အတွင်းဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းလုပ်သက် (၁)နှစ်ရှိရမည်။ - Sales Target တွေလုပ်နိုင်ရမည်။ - FMCG ပိုင်းအတွေ့အကြုံရှိသူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ ဖယ်ရီရှိသည်။အလုပ်ချိန် (၈)နာရီခွဲမှ ညနေ (၅)နာရီခွဲ အထိတာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ရမည်။ စနေတပတ်ခြားပိတ်သည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com,gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09977397705, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Representative – Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀၀၀၀ ကျပ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Trading Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1. Sales Representative – Female (5)Posts /လစာ - ၂၀၀၀၀၀ ကျပ် /တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်။
- ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - အသက် ၂၅ နှစ်နှင့်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - အပြင်သွားလာနိုင်ရမည်။
Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာ ရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 263121101 , 09 977397705, 09 262223785, 09262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , ရုံးခန်းလိပ်စာ –ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင်၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင်ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Sales Representative – Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company ကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ Sales Representative – Male (5) Posts / လစာ-၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် / မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
အသက် (၂၀ မှ ၃၀) ၀န်းကျင်ဖြစ်ရမည်။
ကိုယ်တိုင်ရောင်း ကိုယ်တိုင်စာရင်း လုပ်နိုင်ရမည်။
Sales Representative ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။
မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံတစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်းလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါကဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09262223783, 09262223784 , 09262223785 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Sales Representative - Female(5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ Sales Representative – Female (5) Posts / လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်မြို့နယ် • တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ • အရောင်းပိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိရမည်။ • သွက်လတ်ဖျတ်လတ်ရမည်။ • စကားပြောယဉ်ကျေးချိုသာရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 , 09262223783 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
Sales Representative – Male/Female (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော လှိုင်မြို့နယ်ရှိ Distribution Companyကြီးတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလိုရှိသည်။ အင်တာဗျူးချက်ချင်းဝင်ရမည်။ Sales Representative – Male/Female (5) Posts / လစာ- ၁၅၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/လှိုင်မြို့နယ် •	တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိပြီးသူဖြစ်ရမည်။ •	အရောင်းပိုင်းနှင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။ •	FMCG ပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံရှိသူဦးစားပေးမည်။ •	သွက်လတ်ဖျတ်လတ်ရမည်။ •	စကားပြောယဉ်ကျေးချိုသာရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com Phone No.- 09-263121101 , 09 262223785, 09 262223784 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223784 , 09262223785 , 09262223783 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ အင်းစိန်လမ်းမကြီး )
ှSales Representative - Male (5) Posts / လစာ - ၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်) / ကြည်မြင့်တိုင်မြို့နယ်
1. Sales Representative - Male (5) Posts / လစာ-၁၈၀,၀၀၀ ကျပ် (အထက်)/ ကြည်မြင့်တိုင် မြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၂၀) နှင့် (၃၀) ကြား ဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၁) ရှိရမည်။
Sales Representative - Male (3) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ် / တောင်ဒဂုံမြို့နယ်
2. Sales Representative – Male (3) Posts / လစာ - ၂၀၀,၀၀၀ ကျပ်/တောင်ဒဂုံမြို့နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိထားသူ (သို့) ကျောင်း ကိစ္စကင်းရှင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - Trading ပိုင်းတွင်လုပ်ကိုင်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။
Sales Representative- Male (5) Posts/Salary - 150,000 Kyats(above)/South Dagon Township.
1. Sales Representative - Male (5)Posts / Salary – 150,000 Kyats(above) /South Dagon Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည် (သို့) ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်းသူဖြစ်ရမည်။ - Trading ပိုင်းလုပ်ကိုင်နိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ - အရောင်းပိုင်းနှင့် အတွေ့အကြုံ (၁) နှစ်ရှိရမည်။
ှSales Representative - Male (5) Posts/Salary- 180,000 Kyats(above)/Kamayut Township.
1. Sales Representative -Male (5)Posts / Salary – 180,000 Kyats(above) /Kamayut Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂) နှစ်ရှိရမည်။ - FMCG ပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။
Sales Representative - Male (10) Posts
############# Urgent Requirement ############## မင်္ဂလာပါရှင့် ။ ဒဂုံမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Representative – Male (10)Posts/Salary – 150,000 Kyats/Dagon Township - ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ရှိသူဦးစားပေးမည်။ (လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံမရှိသူများလည်းလျှောက်ထားနိုင်သည်) - အသက် (၂၅)နှစ်ထက် မကြီးသူဖြစ်ရမည်။ - ညွှန်ကြားချက်များအား အချိန်နှင့်တပြေးညီလိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ - ဈေးကွက်အခြေအနေသုံးသပ်၍ အရောင်းမြင့်တက်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်။ - သွက်လက်တက်ကြွ၍ ရန်ကုန်မြို့အတွင်း ကျွမ်းကျင်စွာသွားလာနိုင်ပြီး အများနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တက်သူ ဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative -Male (30)Posts / Salary-150000 Kyats
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ 1. Sales Representative -Male (30)Posts / Salary-150000 Kyats/ Hlaing Township - Any Graduate - Communication Skills ကောင်းရမည်။ - အရောင်းလုပ်ငန်း အတွေ့ကြုံ (၂နှစ် )အထက်ရှိရမည်။ - အသက် (၂၀ နှင့် ၃၀)နှစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ရမည်။ ရုပ်ရည်ပြေပြစ်ရမည်။ - ဖျတ်လတ်၊ သွက်လတ်မှုရှိရမည်။ အလုပ်ကို အချိန်ပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ - ကြိုးစားအားထုတ်မှု နှင့် ရိုးသားမှုရှိရမည်၊ အလုပ်ပေါ် သစ္စာရှိရမည်။ - လိုအပ်ပါက နယ်ခရီးသွားလာနိုင်ရမည်။ (အောက်မြန်မာပြည်) - အမှတ်စဉ်အားလုံးအတွက်လုပ်ငန်းအပေါ်တွင်ရိုးသားကြိုးစားစွာလုပ်ကိုင်နိုင်သူ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူ၊ ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr5@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.-09- 263119775, 09-262223785, 09-977397705, 09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ –MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Sales Representative(ISP)- Male (5) Posts
Sale Representative (ISP) - Male (5)Posts /Salary – 200000 Kyats /Kyimyindaing Township Requirements • 19 – 25 years old • Any graduate • Pleasant personality • Good Communication • Team working • At least 1-2 years’ experience in related field Responsibility • Any know Yangon way plan • Loading products to car • Conduct customers order, service and maintain • Exploring of new customers • Ensuring sale reporting standard and procedure